🥇 ▷ Redmi note 8 iyo Redmi Note 8 Pro ayaa la soo bandhigay usbuuca soo socda: kamaradda 64 MP camera waxay u timaadaa Xiaomi ✅
Redmi note 8 iyo Redmi Note 8 Pro ayaa la soo bandhigay usbuuca soo socda: kamaradda 64 MP camera waxay u timaadaa Xiaomi
In kasta oo maamulaha shirkaddu durba hoos u dhac ku yimid, soo bandhigiddii lagu dhawaaqay ee telefishanka Redmi waxaa ku wehelinaya Xusuusin 8, hadda xogta waa la xaqiijiyay: waan haysan doonnaa Redmi note 8 iyo Redmi note 8 Pro sida ugu dhakhsaha badan bisha Ogosto 29.
Mashiinka oo horeyba si aad ah saliid loogu shubay, waxaan ka hadleynaa dib u cusbooneysiin soo galeysa lix bilood kadib Redmi 7 Pro iyo in wuxuu sii deyn doonaa 64 sener dareeraha ka Samsung. Xaqiiqdi, ka dib markii Realme shalay ugu dambeyntii uusan soo bandhigin xitaa xitaa Realme XT oo leh 64 MP, waxay noqon kartaa garoonka ugu horreeya ee lagu qaado.
Afar muraayadood iyo 64 MP
In kasta oo ay u muuqatay in Realme ay noqonayso tii ugu horraysay ee ay ku kacaan 64 MP, soo bandhigista shalay ayaa ugu dambeyntii nooga tagtay Realme 5 iyo Realme 5 Pro oo leh afar kamarado ah iyo ilaa 48 MP iyo ballanqaad ah a Realme XT oo gaari doonta 64 MP laakiin, haa, horeba bishii Sebtember.
Sidaa darteed, iyo marka laga reebo daqiiqaddii ugu dambeysay oo la yaab leh, waxay umuuqataa in Xiaomi ay leedahay wax walba oo saf ugu jiri kara labada Mobiilkii ugu horreeyay oo leh 64 MP Isocell GW1 Bright sensor, adoo filaaya maalmo dhamaadka bisha: waxay imaan doontaa Ogosto 29.
Muuqaalka soojeedinta ayaa noo oggolaaneysa inaan eegno kamaradahaas iyo dhabarka dambe ee garoonka. Naqshadeynta ayaa xoogaa lamid ah Redmi 8 oo dhawaantan soosaartay, oo moodeelka kamaraddu taagan tahay iyo xarunta. Way ku jiraan saddex ka mid ah muraayadaha indhaha iyo akhriska faraha, halka midigtaadana ay ku jiraan lens dheeraad ah iyo toosh.
Sidaa darteed waxaan ognahay inay labo nooc noqon doonaan, Redmi Note 8 iyo Redmi note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro wuxuu noqon doonaa kan afarta kaamirooyinka leh iyo 64 MP oo ay u badan tahay inuu yahay mid qaab dhismeedka ka wanagsan walaalkiis, maxaa yeelay daabacaadda yar ayaa durbaba muujineysa in “64-ka xaraf ee baarlamaanka uu u dhigmo qaabka ugu sareeya”.
Markii hore, Lu Weibing wuxuu qeexey in dayactirkani uu macnaheedu yahay sawirro cad, batari weyn, shaashad sare / cabirka jirka iyo dareen wanaagsan oo gacanta ku jira. Way adag tahay in laga sugo sawirkii hore, inkasta oo ay noqon karto in qaybta dambe ay ka baxday caag ilaa galaas. Faahfaahinta inteeda kale waxay sii ahaanayaan wax aan qarsoonayn, ugu yaraan illaa iyo Ogosto 29.
Redmi share note 8 iyo Redmi Note 8 Pro ayaa la soo bandhigay usbuuca soo socda: kamaradda 64 MP camera waxay u timaadaa Xiaomi